उपेन्द्र उफ्रिदा बाबुराम थचक्क , पार्टी एकता अन्योलमा – OMKARTIMES
उपेन्द्र उफ्रिदा बाबुराम थचक्क , पार्टी एकता अन्योलमा
ओमकार २०७६ आश्विन ११, १३:४९ बजे
काठमाडौं : दुई पार्टीबीचको एकताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकार छाड्न राखेको सर्त समाजवादी पार्टीले अस्वीकार गरेपछि समाजवादी र राजपाबीचको एकताको विषयले हाललाई विश्राम लिएको छ ।
राजपाले पार्टी एकीकरणका लागि पूर्व सर्तका रुपमा राखेको यो माग समाजवादी पार्टीले अस्वीकार गरेपछि एकता सम्बन्धी प्रक्रियामा अवरोध देखिएको छ । राजपाको यो मागको जवाफमा समाजवादीले सरकार पनि नछोड्ने तर वार्ता अगाडि बढाउने निष्कर्ष सुनाएपछि पार्टी एकीकरण अन्यौलमा परेको हो ।
समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले राजपासँगको पार्टी एकताको कुरा सकारात्मक रहेको बताए ।
‘समाजवादी र राजपाबीच एकीकरणका लागि छलफल भइरहेको छ, सकारत्मक कुरा छ’ महासचिव यादवले भने, ‘एकीकरणका लागि सरकार छोडनै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा आधिकारिक रुपमा आएको छैन ।’
राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले पार्टी एकीकरणका लागि समाजवादीले सरकार छोड्नुपर्ने बताएका छन् । दुबै पार्टीका बीचमा समानताका हैसियतमा एकीकरण हुने बताउँदै उनले सरकार छोडेपछि मात्रै एकीकरण प्रक्रिया अघि बढने उनले बताए ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छन् । पार्टी सचिव इस्तयाक राई शहरी विकास मन्त्री र डा. सुरेन्द्र यादव स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहेका छन् । प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपा नेपालको गठनबन्धनको प्रदेश सरकार छ ।
पार्टी एकीकरणका लागि दुवै पार्टीले विभिन्न प्रस्तावमा छलफल गरेका छन् । तर अहिलेसम्म कुनै निचोडमा पुग्न सकेका छैनन् । सिद्धान्त, बिचारका साथै आन्तरिक बेमेल एवं भागवण्डा किचालेकै कारण पार्टी एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कतिपय नेताको बुझाइ छ ।
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीले सरकार छोड्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । संविधान संशोधनको सर्तसहित पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै उनले संशोधन प्रक्रिया नै अगाडि नबढेपछि सरकार छोड्नुको विकल्प नभएको बताउछन् ।
समाजवादी पार्टी भित्र राजपासँग एकता गर्ने विषयमा डा. भट्टराई हतारोमा देखिन्छन् । केही दिनअघि बसेको बैठकमा राजपासँग एकता गर्न सरकार बाधक भएकोले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव भट्टराईले राखेका थिए । तर, सरकार छाड्ने विषय बैठकको एजेण्डानै नभएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कडा ढंगले प्रस्तुत भएपछि भट्टराई थचक्क हुन पुगेक थिए । पार्टी एकीकरणको विषयमा अध्यक्ष यादव त्यति इच्छुक देखिदैनन् । तर, भट्टराई भने पार्टी एकताको लागि तीव्र लविङ्गमा लागेका छन् ।
यता दशैं, दिपावली तथा छठ पर्वसम्म सरकारमा बसेर संशोधनका लागि दवाव दिने र संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढे त्यसपछि सरकार छोडेर सडक र सदन तताउने आन्तरिक तयारीमा समाजवादी पार्टी रहेको छ ।
समाजवादी पार्टीका महासचिव यादवले संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढे सरकारको बारेमा पार्टीले पुर्नविचार गर्न सक्ने बताए । संशोधनसहित दुई बुँदे सहमती गरेर सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै उनले माग सम्बोधन नभए सरकारमा बसिरहनुको कुनै अर्थ नहुने समेत बताए ।
समाजवादी पार्टी स्रोतका अनुसार राजपासँग पार्टी एकीकरण सरकार छोडेपछि मात्रै अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकिने जनाएको छ । ‘अहिले कुराकानी भइरहेको छ, संशोधन भए ठिकै छ नभए सरकार छोडने र एकीकरण पनि टुंगो लगाइन्छ’ समाजवादी स्रोतले भने ।
विभिन्न मागसहित पटक–पटकसँगै मधेस आन्दोलन गर्दै आएका दुवै पार्टी अहिले फरक भुमिकामा रहेका छन् । समाजवादी सरकारमा छ भने राजपा प्रतिपक्षीको भुमिकाबाट संशोधनका लागि दवाव दिँदै आएको छ ।
तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेका सात मध्ये ६ दल मिलेर राजपा नेपालको घोषणा भयो । तत्कालिन फोरम नेपालले नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी भएको हो ।
द नेपाल टपबाट